त्यहाँ सबैलाई स्कूल विषयहरू प्रत्येक लागि ज्ञान को एक निश्चित (न्यूनतम वा आधार) मात्रा हुनु पर्छ भनेर व्यापक विश्वास छ। कसैले यो स्थिति समर्थन गर्दछ, र कसैले कडा हरेक व्यक्ति उहाँले अध्ययन रोज्ने अधिकार छ जोर। हरेक रूसी भाषा बोल्ने व्यक्ति थाहा उपयोगी छ भन्ने कुरा - जसरी पनि हिज्जे को एक न्यूनतम छ। यो के हो, हामी किन कम से कम यो आवश्यकता हो, र यसले हामीलाई प्रत्येक जीवनमा सजिला मा आउन सक्छ - यस लेखमा तपाईं सिक्न छौँ। पनि सामाग्री हामी लेख्न सबैभन्दा कठिन केही ढाकिएको रूसी भाषा orfogramm।
सबै लागि शैक्षिक कार्यक्रम
हिज्जे भएको सोभियत संघ को कम से कम चिरपरिचित नागरिकहरु के छ। आन्दोलन संग familiarization, प्रेस मा प्रकाशित, यो क्रान्तिको पूरा गर्न आवश्यक थियो किनभने पार्टी, सबै वयस्क अनपढ मान्छे पढ्न र लेख्न सिक्न आदेश दिए। यसरी यो वृद्धि (पूरै हुनत) जनसंख्याको शिक्षा को स्तर। हिज्जे कम्तिमा जहाँ अनपढ बासिन्दा 15 भन्दा बढी मानिसहरू थिए प्रत्येक ईलाका, मा अध्ययन। यदि त्यहाँ थप अनपढ थिए, गाउँमा स्कूल (likpunkt), बच्चाहरु र वयस्क धेरै महिना प्रशिक्षण जसमा खुलेको छ। प्रशिक्षण को अन्त संग प्राप्त कागजात विद्यार्थी आफूलाई साक्षर मान्छे विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
हिज्जे कम्तिमा आज
हाम्रो समय मा pupils लागि न्यूनतम वर्तनी को ज्ञान को प्रश्न पनि सान्दर्भिक, साथै प्रारम्भिक बीसौँ शताब्दीमा किसानहरु लागि हो। नवौं र एघारौँ ग्रेड मा वर्दी परीक्षा - Oblige सबै विद्यार्थीहरू राज्य प्रमाणीकरण पारित। हिज्जे न्यूनतम परीक्षा - यो हरेक विद्यार्थी जो, बारी मा, जवान मान्छे सामुदायिक कलेजहरु, व्यावसायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू मा भर्ना गर्न अनुमति दिन्छ परीक्षा, पारित गर्न जान्नुपर्छ के छ। न्यूनतम हिज्जे नियम पुस्तकहरू, विशेष संग्रह, जो प्रस्ताव विद्यार्थीहरू कठिन शब्द सिक्न समावेश गर्दछ।
यसलाई हिज्जे बच्चाहरु को एक न्यूनतम ज्ञान पहिलो ग्रेड सिकाउन छन् विचारणीय छ। रूसी भाषा मा प्रत्येक पाठयपुस्तक को अन्त मा त्यहाँ पाँचौं ग्रेड गर्न पहिला विद्यार्थी सिक्ने लागि प्रस्ताव गरिएका शब्दावली शब्दहरू एक नम्बर सधैं छन्। रूसी हिज्जे आधारभूत नियमहरू छिटो र अधिक कुशलतापूर्वक कण्ठ गर्न, शिक्षक नियमित शब्दकोशमा र विद्यार्थी ज्ञान संचित आफ्नै रूपमा जाँच dictations अन्य प्रकार। सामान्यतया, अतिरिक्त कार्यहरू यस श्रुतिलेखन संलग्न छन्।
CSE: के सबैजना ठेगाना गर्नुपर्छ?
हिज्जे कम्तिमा - कि मान्छे competently लेख्न अनुमति दिन्छ नियम एक सेट। परीक्षा को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग - एक योग्य एक निबंध लेखन। आधारभूत हिज्जे नियम परीक्षा को drafters द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि:
स्वरवर्णको र शब्द विभिन्न भागमा consonants हिज्जे;
फ्यूज र अलग हिज्जे;
हाइफन संग हिज्जे शब्दहरू;
लेखन शब्दहरू slozhnosokraschennyh नियम;
एक पङ्क्ति बाट अर्को दशमलवकमासङ्ख्यार।
स्नातक प्रत्येक परीक्षा रूसी भाषा को परीक्षा को संरचना जटिलता को स्तर वृद्धि, साथै तर्क actuation संग चयन विषय एक निबंध-तर्क लेखन संग परीक्षण को समाधान छ, स्रोत जो व्यक्तिगत अनुभव वा साहित्यिक काम रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार (उत्तरार्द्ध हुन रुचि छ)। काम को पहिलो भाग न्यूनतम हिज्जे समावेश गर्नुहोस्। परीक्षा, प्रति दिन प्रशिक्षण को केही घण्टा लेख्न आफ्नो तत्परता जाँच गर्न एक सरल प्रक्रिया - साक्षरता को स्तर निर्धारण।
के हिज्जे रूसी नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक विदेशी थाहा कम्तिमा उपयोगी छ। रूसी भाषा आधारभूत नींव को ज्ञान - नागरिकताको दर्ता लागि एक अनिवार्य मापदण्ड। रूसी कानून अनुसार, एक प्रवासी रूसी भाषा मा परीक्षा को लागि अवस्थित सूचीबाट राज्य प्रशासन शरीर लागू हुनुपर्छ (यो निजी र विशेष केन्द्र हुन सक्छ)। यस प्रवासी को सफल पूरा गरेपछि प्रमाणपत्र परीक्षा प्राप्त गर्दछ। परीक्षा मात्र के हिज्जे न्यूनतम थाहा, तर पनि राज्य प्रणाली, रूसी संघ को कानून, साथै देश को इतिहास को केही पक्षहरू को आधारभूत नींव अधिकार आवश्यक छ। को को परीक्षा को "मुक्ति" समावेश हुन सक्छ:
एक पूर्व सोभियत गणराज्यहरु को देशहरूको एक परिणामस्वरूप, आधारभूत शिक्षा प्रमाणपत्र उपस्थिति;
शिक्षा को प्रमाणपत्र उपस्थिति राज्य अन्तिम परीक्षा को परिणाम मा रूसी संघ मा प्रवासिहरु गर्न जारी।
केही हिज्जे consonants नियम
निस्सन्देह, तिनीहरूले पनि सम्झना हुनुपर्छ जो सम्भव अपवाद, एक विशाल संख्या छ किनभने रूसी भाषा सिक्ने सबै नियमहरू हुन सक्दैन। कम से कम हिज्जे के हो, तपाईं सिक्न सक्छौं र विशेष methodical संग्रह।
विशेष ध्यान यदि तपाईं शब्द प्रमाणीकरण विधि प्रयोग गर्छन् गल्ती गर्न तिनीहरूलाई सजिलो मा unpronounceable consonants संग शब्द दिइएको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, शब्द "सूर्य"। unpronounceable consonants "एल" लेख्न भूल छैन, यो प्रमाणिकरण शब्द चयन गर्न आवश्यक छ - "। घाम"
त्यहाँ रूसी छन् र यस्तो consonants र आश्चर्यजनक को voicing रूपमा घटना। शब्द चर्को यसलाई भन्न जब "ओक", रूपमा हिज्जे नियम "शब्द को अन्त मा आश्चर्यजनक व्यञ्जनवर्ण" को एक उदाहरण सेवा गर्न सक्छन्, यो सुने गरिनेछ [N] गर्छन्। "Oaks" - शब्द को हिज्जे जाँच गर्न, तपाईँले यसलाई बहुवचन राख्न आवश्यक छ। उदाहरणका voicing व्यञ्जनवर्ण - शब्द "गर्नुहोस्।" "बारे [को] बा" सुने। हिज्जे जाँच गर्न, हामी त्यहाँ, यो स्पष्ट "एक" को ध्वनि सुन्न "सोध्न" एक क्रिया हो कि सम्झना गर्नुपर्छ। यो स्थितिमा यो शब्द स्क्रीनिंग छ।
रूसी भाषामा स्वरवर्णको हिज्जे
लेखन बारे शङ्का अक्सर गराउँछ स्वरवर्णको। Unstressed सजिलै चेक शब्द चयन गरेर जाँच, तर त्यहाँ ती शब्दहरू शब्दकोश भनिन्छ र रूसी भाषा कम्तिमा तिनीहरू बाल्यकाल देखि सिकाउनुभयो गर्नुपर्छ हिज्जे समावेश छन् छन्।
मूल शब्दमा विशेष उल्लेखनीय एकान्तरण स्वरवर्णको: "Ber-बीर", "der डिर", "भू-सुटिङ" र अरूलाई। मूल को प्रत्यय "एक" छ भने, यो पत्र "यू" लेख्न आवश्यक छ, र यदि छैन - को "ई"। यो नियम अपवाद हुन्छन् - यो शब्द "विवाह", "वाक्यांश", "जोडी", र अरूलाई छ।
प्रत्येक राम्रो-लेखक यस्तो विशेषण को अन्त मा स्वरवर्णको हिज्जे (साथै प्रत्यय) र prepositions रूपमा orfogrammy थाहा हुनुपर्छ। स्वरवर्णको हिज्जे सम्बन्धित सबै भन्दा साधारण त्रुटि - यो उपसर्ग "pre-" "pri-" र "non-" "ni-" तिनीहरूलाई लेख्न छ। एक विशेष मामला लेख्न के कन्सोल बुझ्न, यो ज्ञान को मूल्य शब्दहरू मदत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, "pri-" को उपसर्ग लगभग, अभिवृद्धि वा अपूर्ण कार्य बुझाउँछ। कुनै पनि कार्य, आदि को समापन संकेत - यो उपसर्ग "pre-" "धेरै" मतलब (यति धेरै सुन्दर सुन्दर) प्रयोग गर्न सकिन्छ
फ्यूज, विभाजित र हाइफन संग लेखन
बोलीको फ्यूज / अलग लेखन सेवा भागहरु (prepositions) र शब्द भागहरु सन्दर्भमा रूसी भाषा आधारभूत नियम पालना।
Prepositions र भाषण अन्य सहायक भागहरु संग शब्दहरू अलग, उदाहरणका लागि, लिखित घर अन्तर्गत।
, Morpheme उदाहरणका लागि, शब्द "पैन" - उपसर्गको र प्रत्यय तिनीहरूले शब्द अभिन्न भाग हो रूपमा, सँगै लेखिएको छ।
कणहरु तिनीहरूले सम्बन्धित जो यी शब्दहरू, संग hyphenated छन्। उदाहरणका लागि, "एक पटक"; "यो धेरै कुरा छ!"।
"औं" संग समाप्त "को लागि" उपसर्ग संग विशेषण, "उसलाई", "स्की", "राजा" पनि हाइफन संग लेखिएको छ। उदाहरण:
यस वाक्य र अल्पविराम को सुरुमा लेखिएका छन् भनेर परिचयात्मक शब्द घन्टी-तारले छन्, र hyphenated छन्। उदाहरणका लागि, "पहिलो," "दोस्रो," "तेस्रो"।
लेखन prepositions मा कठिनाई अक्सर डेरिवेटिव कारण। तिनीहरूले सँगै जस्तै लिखित गर्न सकिँदैन, र अलग भएको उपसर्ग संग। उदाहरणका लागि, "कारण आगो गर्न" "मनमा", आदि यस्तो शब्द हृदय द्वारा सम्झना सजिलो छन्। त्यहाँ बहाना, तिनीहरूले hyphenated छन् "जटिल" भनिन्छ। उदाहरणका लागि, "घर जंगल देखिन्थ्यो किनभने" "को बार बाहिर एक बिल्ली को बच्चा पायो।"
B2 के हो? अंग्रेजी को B2 स्तर अर्थ?
ऋण - यो ऋण ... विविधता
शरबत - घर मिठाई
Angelina Romanov: नयाँ sprocket भेट्नुहोस्
बालिका लागि स्कर्ट crochet: बुनाई को रहस्य
उत्पादन "Oaf" Fonvizin मा लेखन। नायक को तस्बिरहरू
Estradiol र progesterone: मान्यता र विचलन विश्लेषण
किन चरा को आम मृत्यु छ